Unokuba nobuhlobo ngakumbi kunye nabantu abafana nawe ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Indlela yokuba nobudlelwane ngakumbi kwaye uthandane nabantu. Ngokwahlukileyo koko abantu abaninzi bakucingayo, akukho mntu unokuba mhle okanye abe mbi ngalo lonke ixesha. Abanye abantu banokuba neentloni ngakumbi, bangenalwazi, kwaye bangazithembanga, kodwa bahlala benjalo iimpendulo ezintle kwaye ezintle kubantu okanye kwiimeko ezithile. Kwakhona kwenzeka ukuba abantu abaphumayo nabadlamkileyo banokurhoxiswa ngamaxesha athile. Ukungathandi okanye uvelwano ziimpendulo ekusebenzisaneni kwabantu kwaye kubandakanya izinto ezininzi kunye nezinto ezahlukeneyo.
Kwinqaku elilandelayo siza kukunika izitshixo zokuba nobudlelwane ngakumbi kunye nokuthandwa ngabantu. Ngaba uza kuyiphosa?
1 Yintoni eyenza uvelwano okanye ukungathandi?
2 Indlela yokuba nobudlelwane ngakumbi kwaye abantu abafana nawe inyathelo ngenyathelo
2.1 Zazi ngokwakho
2.4 Hlonipha iiyantlukwano
2.5 Musa ukoyika ukwenza iimpazamo
2.6 Yiba nguwe
2.7 Fumana iimpendulo zakho
Yintoni eyenza uvelwano okanye ukungathandi?
Izinto ezahlukeneyo zinokubangela impendulo engalunganga, njengobuntu, inkangeleko, imo, ubuchule kunye nemvelaphi yeemvakalelo. Kukho kwakhona ezininzi izinto ezibangela iimvakalelo ezakhayo, ezifana nokuchongwa kunye nobuntu, izinto ezithandwayo kunye namaphupha, ukuncoma, uvelwano kunye nomanyano ngenxa yesizathu esifanayo.
Nanini na xa unobudlelwane nomntu, uvula wonke umxholo wabo weemvakalelo, onokuthi uqalise iinkumbulo zentlungu okanye uthando, uvuyo okanye usizi, uloyiko okanye umsindo. Ukuba ubunomama olawulayo, ngokomzekelo, usenokucaphuka ngokunzulu xa usebenzisana nomntu ozenza ngathi ulungile yaye akushiyi nethuba lokuba nabani na athethe.
Oku kuthetha ukuba umthamo we-sUkuba nobudlelwane kunento eninzi yokwenza nokuzazi kunovelwano. Ukunxulumana nabanye kuxhomekeke ngakumbi ekukwazini komntu ukucinga ngeemvakalelo zakhe nokuqonda ibali lobomi bakhe.
Indlela yokuba nobudlelwane ngakumbi kwaye abantu abafana nawe inyathelo ngenyathelo
Inyathelo lokuqala lokufumana ulwazi lwesiqu sakho kunye nokuba nobudlelwane ngakumbi ukubazi ubuntu bakho nzulu, kunye nobuchule bakho, imida kunye nembali yobomi. Oku kungenxa yokuba abantu zizipili ezibonakalisa kanye ukuba singoobani na. Sidla ngokuba nomsindo okanye singamthandi umntu ngenxa nje yokuba loo mntu efana nathi, okanye yinto ebesingathanda ukuba yiyo.
Funda ukuzithanda, ngamandla akho onke kunye nobuthathaka bakho. Ukuba awuzamkeli njengokuba unjalo, kuya kuba nzima kakhulu kuwe ukuba ubamkele abantu njengoko benjalo, usoloko ucinga ukuba ingxaki ikwabanye.
Ixesha ledinga elingagqibekanga el mundo unebali elimnandi elinokubalisa, elinemizekelo neemfundiso ezilungileyo. Xa uzithemba, ulahlekelwa yimfuneko yokuthelekisa nokukhuphisana nabantu.
Khumbula ukuba umntu ngamnye wahlukile yaye unamandla nobuthathaka. Ngolu lwazi, funda ukuphila nokuhlonipha iiyantlukwano phakathi kwabantu, kungekhona ukudala ukulindela kunye nokuphazamiseka kubudlelwane.
Musa ukoyika ukwenza iimpazamo
Abantu abaninzi bakhetha ukuzenza ikheswa kunokuba babeke esichengeni sokuthetha izinto ezingenamsebenzi nokwenza iimpazamo esidlangalaleni. Abantu bayazenza iimpazamo, kwaye kucacile ukuba uya kuzenza iimpazamo amaxesha amaninzi, kodwa akukho ntoukufa uya kuyeka ukukwamkela okanye ukukuthanda ngenxa yempazamo. Qonda ukuba awufezekanga, njengaye wonke umntu.
Ungazami ukwahluka, mntu ngamnye unemvelaphi nebali lakhe, yaye abantu baya kukuthanda ngale ndlela uyiyo. Sonke sahlukile kwaye sahlukile kwaye akuyomfuneko ukuba bonke abantu basithande. Yiba nguwe kwaye uzingqonge nabantu abakuthandayo ngenxa yokuba ungubani.
Fumana iimpendulo zakho
Cingisisa ukuba kutheni ungakhululekanga nomntu, zeziphi iimvakalelo abazivelisayo kuwe, yintoni ekufuneka uyamkele okanye uxolele. Oku kubalulekile, kungekhona nje ukwakha ubudlelwane obuhle, kodwa ukwandisa ukuzazi kwakho kwaye uzisombulule iingxabano zakho zangaphakathi.
Ezi ibe zonke iingcebiso ukwazi indlela yokunxibelelana ngakumbi kunye nokuthanda abantu. Siyathemba ukuba uya kuzisebenzisa kwaye zikuncede kwinjongo yakho. Ukuba unomdla wokwandisa ulwazi lwakho, qhubeka ukhangela fumanisa.online kwaye ungawaphosi amanye amanqaku ethu.